Madaxweyne Biixi Oo Suxufiyiin Caalami Ah Oo Booqasho Ku Yimid Somaliland Uga Warbixiyay Saddex Qoddob Oo Uu Wax Ka Qabanayo | Haqabtire News
Madaxweyne Biixi Oo Suxufiyiin Caalami Ah Oo Booqasho Ku Yimid Somaliland Uga Warbixiyay Saddex Qoddob Oo Uu Wax Ka Qabanayo
Hargeysa:-(HTN) Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey qoddobada uu awooda saarayo inuu wax ka qabto muddo xileedkiisa.
Siday werisay wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA, waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi oo suxufiyiin caalamiya oo booqasho ku yimid dalka warbixin ka siiyey saddex qoddob oo uu mudnaan gaar ah siinayo inuu wax ka qabto.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in qoddobka koowaad la xidhiidho sidii Somaliland aqoonsi caalami ah ku heli lahayd, waxaanu farta ku fiiqay in caalamka marka lala soo qaado aqoonsiga Somaliland ay iskaga riixaan in Somaliland iyo Soomaaliya ay arrintaas xal ka gaadhaan.
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, waxa uu xusay in Soomaaliya uu ka jiro jaho-wareer iyo fowdo , sidaas darteed ay adag tahay in Soomaaliya lagala xaajoodo aqoonsiga Somaliland, waxaanu caddeeyey in madaxweynaha Soomaaliya aanu metelin dadkiisa una baahan yahay ciidammo shisheeye oo ilaaliya naftiisa.
Madaxweyne Biixi oo ka hadlayey qoddobka labaad ee uu doonayo inuu wax ka qabto oo ah saboolnimada, waxaanu intaas ku daray in 27 sannadood oo aqoonsi aanay helin Somaliland iyo 10 sannadood oo ka horeeyey oo ay la diririyeen taliskii Maxamed Siyaad Barre ay Somaliand kaga tageen saboolnimo.
Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlayey qoddobka saddexaad ee horyaala inuu wax ka qabto ku tilmaamay saamaynta taban ee ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunka, waxaanu bayaamiyey in roobabkii heli jiray waddanku ay yaraadeen, Madaxweynuhu wuxuu warbaahinta caalamka u xaqiijiyey in xoolaha nooli ay ahaayeen badeecada kaliya ee Somaliland u dhoofiso adduunka, xoolihiina ay yaraadeen Boqolkiiba Lixdan.
Madaxweynaha Somaliland oo la weydiiyey jidka uu u marayo inuu wax ka qabto baahiyaha uu soo bandhigay, waxa uu sharraxay inuu doonayo inay ka faa’iidaystaan khayraadka dabiiciga ah ee Somailand sida shiidaalka. Waxaanu intaas ku daray inay jiraan dhawr shirkadood oo u muujiyey inay danaynayaan shiidaal baadhista.
Madaxweyne Muuse Biixi waxa uu intaas ku ladhay inuu doonayo in Somaliland marto nidaamkii ay isticmaali jireen dalalka Asia sida Philippine, India, iyo Thailand, oo dibadda u diri jiray dad takhakhus xirfadeed leh, waxaanu ku dooday in dadka reer Somaliland ay yihiin qaar xirfadoodu sarrayso oo ku fiican wax kasta oo ay qabanayaan.
Siday warisay wakaallada SOLNA, Madaxweyne Muuse Biixi wuxuu ku soo gabogabeeyay inuu doonayo inay Somaliland noqoto waddan is-bixin kara oo nabdoon isla markaana saaxiib la ah dalalka caalamka oo dhan.
Xigasho: Wakaallada SOLNA